Amadoda Anezinwele Ezinhle - Amaphutha Avamile Nezixazululo | Amadoda aSitayela
Amaphutha amane ajwayelekile enziwa amadoda anezinwele ezinhle (nokuthi angawalungisa kanjani)
Uma unqabe inketho yokuthwala ikhanda eligundiwe, into esebenza kahle kakhulu emadodeni amaningi anezinwele ezinhle, Ukugwema la maphutha kuzokusiza ukuthi uthole okuningi kulokho onakho.
Abalandelayo bane imikhuba esebenza ngokumelene nezinwele ezinhle nokuthi yini okufanele uyenze esikhundleni salokho ukukhombisa izinwele ezisesitayeleni nezinomzimba ogcwele:
1 Ukugeza izinwele zakho njalo
2 Sula izinwele ngethawula kuphela
3 Sebenzisa imikhiqizo esindayo
4 Ukuthola izinwele ezingalungile
Ukugeza izinwele zakho njalo
Ngokuqaphela ukuthi izinwele zabo ziqala ukuncipha, amadoda amaningi azihlanganisa nokuwasha izinwele kaningi. Kodwa ukungagezi izinwele zakho lapho kunesidingo kumane kwenze inkinga ibe yimbi ngokwedlulele, okwenza izinwele zibonakale zihle kakhulu futhi kubangele ukuthi isikhumba sasekhanda singabi nempilo enhle. Uma unezinwele ezinhle, cabanga ukuyigeza njalo ukuyigcina igcwele futhi uvimbele izinkinga ezifana ne-sebum nenkwethu, okungasheshisa ukulahleka kwezinwele.
Sula izinwele ngethawula kuphela
Ukwenza ngaphandle kwama-dry dryers ukuchitha elinye lamathuluzi amahle kakhulu wokunikeza ivolumu yezinwele ngendlela engokwemvelo. Ngemuva kokugeza izinwele zakho, yome ithawula kancane futhi, ngenkathi isemanzi, faka umoya oshisayo. Khumbula ukuqondisa imicu phezulu ukuze ithole ivolumu ephezulu kakhulu.
Sebenzisa imikhiqizo esindayo
Imikhiqizo ethile yezinwele, kokubili ukulungisa nokusetha, ingeza isisindo ezinweleni, izenze zibonakale zihle kakhulu. Gwema ukusebenzisa imikhiqizo ewuketshezi kakhulu, ukhilimu noma uwoyela. Esikhundleni salokho, funa imikhiqizo efaka igama elithi volumizer noma pre-blow dryer. Lapho utayela izinwele zakho, cabanga zomile, njengoba kunjalo ngama-wax ayimpuphu nayo yonke imikhiqizo yokuqedela i-matte ngokujwayelekile. Eyaziwa kakhulu futhi enconyiwe yiSchwarzkopf's Dust It:
Ukuthola izinwele ezingalungile
Izinwele ziyisihluthulelo uma kuziwa ekufihleni izinwele ezinhle. Njengenjwayelo, ukubheja okuphephile ukuwugqoka ungabi mfushane kakhulu futhi ungabi kude kakhulu, nengxenye ephezulu isikhathi eside kunezinhlangothi nape. Ukugqamisa noma ukudaya izinwele zakho umthunzi okhanyayo kungasiza ukufihla ukungabi bikho kwabantu.
Umlingisi uTheo James ('Divergent') angasebenza njengogqozi. Njengoba ukwazi ukubona, izinwele zakhe zimfushane ezinhlangothini, kanti ngaphezulu zinde, kodwa azizinde kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Amaphutha amane ajwayelekile enziwa amadoda anezinwele ezinhle (nokuthi angawalungisa kanjani)
Abesilisa abahamba ngezinyawo bakhuthaza amaqoqo entwasahlobo / ehlobo ka-2018